के तपाईलाई थाहा छ, चट्याङ किन पर्छ ? कसरी जोगिने ! « Nepal Bahas
के तपाईलाई थाहा छ, चट्याङ किन पर्छ ? कसरी जोगिने !
प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०६:३७
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष हाम्रो देशमा चट्याङ लागेर धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । कति घाइते भएर जिवन मर्नु न बाच्नु अवस्थामा छन् ।
प्रायजसो न्यानो महिनाहरुमा बिजुली चम्किने र मेघ गर्जनसहित चट्याङ पर्ने गर्छ । चट्याङको बारेमा हामीले धेरै मिथकहरु सुन्दै आएका छौं । जस्तैः चट्याङ सधैं सबैभन्दा अग्लो वस्तुमा पर्छ वा चट्याङ कहिल्यै पनि एकै ठाउामा दोर्होयाएर पर्दैन । तर, यी दुवै कुराहरु सत्य होइनन् ।
यदि कसैलाई चट्याङ लाग्यो भने उनीहरुको शरीर जलेको हुन सक्छ । चट्याङले मुटुलाई असर गर्छ । त्यसैले चट्याङ लागेको मानिसको मुटुको धड्कन छ कि छैन परीक्षण गर्नुहोस् । एम्बुलेन्स वा स्वास्थ्यकर्मीलाई खबर गर्नुहोस् ।
उनीहरु आइपुग्न भन्दा पहिले तपाई अरु चट्याङ पर्नबाट जोखिम छैन भन्ने सुनिश्चित हुनुहोस् । उनीहरुको मुटुले काम गर्न छोडेको छ भने सीपीआर अपनाउनुहोस्, तपाईलाई इलेक्ट्रिक सक लाग्दैन । किनभने शरिरमा विद्युतीय चार्ज बसिराख्दैन ।